Microsoft Dynamics 365 | Kusanganiswa kweRM & ERP - ITS Tech School
Microsoft Dynamics 365 | Kusanganiswa kweRMR & ERP
Chii chinonzi Dynamics 365?
Kubatanidzwa neHofisi 365
Iko mari yakadini iyo Microsoft Dynamics 365 inodhura?
Mazuva ano mabhizimusi ari kutsvaga matambudziko uye akagadzirira kugadzirisa kuchinja kwejjita. Masangano makuru maviri uye makuru makuru anoshandiswa nemaitiro akadaro anogadzirisa rimwe nerimwe rekushanda kwavo nyore nyore kuitira kuti vagone kuisa pfungwa pane mamwe mabhizimisi anogadzirisa kuitira kuti vabatsirwe. A standout pakati pezvinonyanya kutarisirwa kushandurwa kwedhijiti mumamiriro ezvinhu ikozvino yaiva Microsoft Dynamics 365.
NaMicrosoft unleashing Dynamics 365, imwe neimwe yezvaanofunga yakasvika pakuguma. Inovakwa nechinangwa chemugodhi, Microsoft Dynamics 365 inotarisira kubatsira mabhizinesi asina CRM (Customer Relationship Management) kana ERP (Enterprise Resource Planning), asi kusanganiswa kwezvose. Dynamics 365 inonyanya kushandiswa kwegore rinokonzerwa neE ERP neRRM hurongwa hunoenderana nekugadzirisa uye kugadzirisa matanho.
Microsoft Dynamics 365 inoshandiswa kupa danho kune masangano, pakutanga, maitiro avo. Icho inoyerera mukati mebhizimisi yako yehutano kuti inopindirana mumamiriro ayo chaiwo nekugadzirisa. Zvishoma nezvishoma, uchawana zvigadziro zvaunoda paMicrosoft AppSource.
Yakapedzerwa pasi pezita rekodhi - Madeira. Chigadzirwa chacho chinosanganisira zvikonzero zvishoma zvinoshandiswa zvakagadzirwa zvinopa uye kutarisira maitiro akasiyana-siyana ehurumende semabasa ekuratidzira, kuratidza, mari, kubhadharwa kwebasa, kubhadhara kubatsiridza uye kubhadhara mutengi. Ivo vanonzi Dynamics 365 yeOp Operations, Dynamics 365 for Field Service, Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 ye Project Project Automation uye Dynamics 365 yeVatengi.
Simba reMicrosoft 365 rine mutauro wekufananidza wekutsvaga unopa hutano hwakasimba neMicrosoft Office 365 uye mapurogiramu akasiyana-siyana ebhizimisi neA institutional API. Cortana Intelligence, Simba BI neInternet yezvinhu zvinhu chimwe nechimwe chepakati imwe chikamu cheMicrosoft Dynamics 365. Pano. vatengi vanogona kukanganisa zvinyorwa mune imwe soro - Microsoft AppSource.
Microsoft Dynamics 365 ine kubatana kwakanaka neHofisi 365, kunyanya ne Outlook. Iwe unogona kutarisa kutumira zvinyorwa, zvinyorwa uye kukumbira kubva kuPexlook. Iwe unogonawo kugadzirisa uye kuchinja marekodhi usina kusiya email email. Iwe unogonawo kuona mazamu akafanana, maitiro ezvakaitika kune vose vanobatsirwa mubhasi rezasi paunenge uchitumira mameseji vakawanda vatengi. Zvimwe zvakaenzaniswa zvinokonzera kuti kusanganiswa uku kuite zvisingaitiki.
Pane maBhaibheri maviri eMicrosoft Dynamics 365, Enterprise uye Bhizimusi rekubudiswa. Muchiitiko apo shamwari dzako dzinodarika vatengi ve250, Enterprise Edition ichave yakakodzera shamwari yako. Pasinei nechokwadi chokuti, kana ushamwari hwako huri kune 10 kune vatengi ve250, kusunungurwa kwebhizimisi kuchashandira zvido zvako. Sezvo Bhizinesi reBusiness riri pakati pekambani dzemauto, nenzira iyi inosanganisira Dynamics 365 yeMari. Pamusoro pehuwandu hweMabhizimisi, Mashandiro 365 anopiwa uye Mariki haisi.
Kuvanhu vakakwana, Bhizinesi reMabhizimisi rinobvumira iri $ 50 per Client mwedzi mumwe nomumwe. Chiedza nevatengi vanogona kuibatsira pa $ 5, kuburikidza nevatengi mwedzi mumwe nomumwe. Kunyange zvazvo Enterprise Edition inouya muzvirongwa zviviri - kuronga 1 inosanganisira imwe neimwe yemakumbo kunze kweMabasa. Iko inokosha $ 115 per Client mwedzi mumwe nomumwe. Urongwa 2 hunosanganisira zvinhu zvose zvinosanganisira Mashandiro uye anokosheswa se $ 210 per Client mwedzi mumwe nomumwe. Chiedza chevatengi vanogona kuibatsira pa $ 10 per Client mwedzi mumwe nomumwe.
Izvi zvakashambadza zvikuru 'kuchinja kwedhigirii' zvakanaka kuenda kunoshandura zvose Customer Relationship Management uye Enterprise Resource Planning yevamwe masangano. Izvo zviitiko hazvina mubvunzo kuti zvinonakidza uye chimwe chinhu chinochengetedza ziso. MaMicrosoft aRRM uye ERP versions achiripo pamberi pemazuva ano.
Advanced Solutions Solutions ye Microsoft Exchange Server 2013
SharePoint 2016 architecture: Chii chitsva kune vashanduri?